Iko kushandiswa kwejack base: Inoshandiswa nepombi dzesimbi uye scaffolds mune yekuvaka maitiro ekugadzirisa kukwirira kweespaffolds uye pombi dhizaini, chiyero chinotsigira uremu, uye kutakura-kutakura. Inonyanya kushandiswa mukugadzira kongiri kudira kwekuvaka. Nekukurumidza kukurumidza kwekutengesa zvivakwa uye matatu-mativi ekufambisa mumakore achangopfuura, huwandu hwedenga rutsigiro hwaitawo nekukurumidza kufambira mberi. Kupatsanurwa kwemajuru ekuvaka: 1. Zvinoenderana nechikamu ...
1.Introduction Luowen HDG fureni scaffolding yakatarwa inorema basa (675 kg's) uye inokodzera kune ese mabasa anosanganisira: Bricklayers, kuputsa, vavezi, matombo masoni, simbi vanogadzira nezvimwe. vanoda kutenga scaffold ivo pachavo uye chengetedza mari. Kurema kurema - Kwakakurumidza kumisa - Inogona kuiswa nemunhu mumwe - Yakagadzirwa! - Zvese izvi zvinokuchengetedza nguva nemari. 3.Vavaki vanoda ...
Kwikstage Scaffolding Imwe Nhanho ine 500mm spigot uye iyo 'V'-Pressings iri munzvimbo 495mm nzvimbo uye inopa nzvimbo nzvimbo dzeLedger neTransoms. Quality Kwikstage inogadzirwa kune epasi rose zviyero mukati meiyo ISO 9002 yemhando yekuvimbisa nharaunda uye chengetedzo yakadhindwa kuti izivikanwe uye yehutano vimbiso yezvinangwa. Zvakareruka uye mutengo unoshanda Zvinoumbwa nezvakakosha zvikamu zvina chete, pasina zvigaro zvakasununguka, kuchengetedza, kutakura uye kuungana kweKwikstage kuri kuwedzera ...
1.Introduction Luowen Ring Lock Scaffolding ndeye mhando nyowani scaffolding, inonyanya kuitwa neRin ndiro, standard, ledger, brace uye zvishongedzo, inogamuchirwa kwazvo mumusika wepasi rose, nekuda kwezvakanakira uye nekushandisa zvakanyanya. 2.Feature 1.Simple dhizaini: Iyo huru zvikamu zvinosanganisira yakajairwa, ledger, zviri nyore kuungana nekukatanura, uye zvakare nyore kuchengetedza, kuchinjisa nekuchengetedza. 2.Flexible mukumisikidza: Kune maburi masere eringi ndiro, saka bhuku uye chibooreso zvinogona kuisa ini ...
1.Introduction: Luowen CupLock Scaffolding iri mhando nyowani yekukwirisa, inotsvagiswa, yakagadzirirwa uye kugadziridzwa ichiratidzira tekinoroji yekumberi yekunze kwejoinhi uye zvishongedzo, zvakanaka muhunhu nekushandisa. 2.Feature. 2.Kuchengeteka uye Kugadzikana: Iyo kumusoro mukombe ine sikuruwa kukweshera uye kuzvidzora-giravhiti, inogona kuzvidzora-kukiya yakadzikama, th ...
H20 tanda danda (multilayer plywood yewebhu uye nepurasitiki musoro) Luowen H20 Timber Beam ndeyehuremu huremu, kukwirira kusimba, kugona kwazvo mukusapinda mvura, acid-proof, alkali-proof, kururamisa kwakanaka. Hunhu: 1, Kurema Kurema: kuwanda kweH20 Timber Beam inongova 4.5kg pamita imwe, zviri nyore kuendesa, kubvarura nekuisa. 2, High Kusimba: Iyo H20 Timber Beam haisi nyore kupaza nekuda kwefibre. 3, Kwakanaka Uchapupu: Iyo H20 Timber Beam yakanaka pakudzivirira mvura, acidproofing, alkal ...
Ringlock Scaffolding Zvikamu, Metal Cuplock Scaffolding, Ringlock Scaffolding chikomboredzo, Heavy Duty Ringlock Scaffolding, Scaffolding Chinogadziriswa Screw Jack, Kwikstage Scaffolding Chishongedzo,